ငါးမိနစ် ..လူလိမ်တွေ ။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငါးမိနစ် ..လူလိမ်တွေ ။။
ငါးမိနစ် ..လူလိမ်တွေ ။။
Posted by “ဘီလူးၾကီး”ogre on Aug 16, 2011 in Copy/Paste | 16 comments
ကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းကိုသိပ်ယုံကြည်လွန်းလို့ လက်မှာပတ်ပြီးဆောင်ထားတယ်များ ထင်လို့လား
ကိုယ့်လက်ပေါ်ကဟာမပြောနဲ့ အိမ်က သူ့ထက်ကြီးတဲ့ ဟာတောင်မယုံဘူး အဲဒီအပြင်
အိမ်က ဟာတွေထက် မြင့်မြင့်ရှည်မျှောမျှောကြီး ဆောက်ပြီး အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာကြီးတွေကိုပိုမယုံဘူးဗျာ
ကျွန်တော်ကသာမယုံတာပါ . ဒါပေမယ့်ဒါကြီးက မြန်မာပြည်ရဲ့ခရေစီ ဖြစ်နေပြီလားတောင်ပြောရမယ်ဗျ
မြန်မာပြည်တနံတလျှား မြို့တွေမှာတော့ ဒီဟာကြီးတွေ ဆောက်ပြီး တစ်ခန်းတစ်နားခြံတောင်ခတ်ထားလိုက်သေးတယ်လေ
ဒီဟာကြီးတွေဆိုတာက နာရီစင်ကြီးတွေကိုပြောတာပါဗျာ နာရီစင်ကြီးတွေဟာ တစ်မြို့တစ်ခုနီးပါး မရှိမဖြစ် မဆောက်မနေရ
ဆောက်ထားသလားအောင့် မေ့ရတယ် အင်္ဂလိပ်ခေတ် ကတည်းက ဆောက်ခဲ့တာများတဲ့အတွက်
အင်္ဂလိပ်တွေဟာ သူတို့လူမျိုးတီထွင်ခဲ့တဲ့နာရီကို တော်တော်လေး တန်ဘိုးထား ဂုဏ်ယူခဲ့မှန်း
ဒီလိုနာရီစင်ကြီးတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ် ….။။။။။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရ နာရီစင်ကြီးတွေကိုဖေါ်ပြရ ရင် မန္တလေးမြို့က ဈေးချိုနာရီစင်/မေမြို့ က နာရီစင်
စစ်တွေမြို့က နာရီစင်/ရန်ကုန်မြို့ မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကနာရီစင် /ရန်ကုန်မြို့ ဗဟိုတရားရုံးကနာရီစင်
ဒါကတော့ကျွန်တော်သိမှီသမျှ လက်လှမ်းမှီရာနာရီစင်များပါ ကျန်အခြားသောမြို့တွေမှာလဲ ရှိနေကြပါသေးတယ်
နာရီဆိုတာ ဟိုးရှေးရှေးထဲကအသုံးပြုလာခဲ့ကြပေမယ့်ဒီခေတ်ဒီအချိန်မှာ အသုံးပြုတဲ့ နာရီတွေနဲ့တော့ပုံသဏ္ဍန်ခြင်းကွာခြားပါတယ်
ဟိုးအရင်ကတော့ လူကထိုင်စောင့်ကြည့်ပြီး အသုံပြုရတဲ့ သဲနာရီ/နေနာရီတွေ ကို တီထွင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါပဲ
အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘုရားကျောင်းကမှန်အိမ်လေး လေတိုက်လို့ ဘယ်ညာလွှဲနေတာကို ဆပ်ဆပ်ဆော့ဆော့မြင်သွားတဲ့
လူတစ်ယောက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခုလက်မှာအလေးခံပြီး ဝတ်ဆင်စရာပစ္စည်းတစ်ခုအဆင့်အထိ ဖြစ်လာရတော့တာပါပဲ
ဒီလူကြီးက တော့ ပထမ လက်တံနဲ့နာရီတွေကို ချိန်သီးကြီးနဲ့လုပ်လိုက်တာပဲဗျ သူကစလို့တီထွင်ခဲ့တဲ့ အရာနောက်ကနေ
ဆင့်ပွားတီထွင်လာလိုက်ကြတာ စင်ကြီးတွေဆောက်ပြီး ဒီနာရီကြီးတွေကို လူတကာမြင်အောင် ပြထားရာက ဒီနာရီတွေဟာ
အဲဒီစင်ပေါ်က ခုန်ချလိုက်ကြတော့ ဧည့်ခန်းထဲကိုရောက်လာတော့တာပါပဲ
မှန်ဘီရိုခပ်ကြီးကြီးတစ်လုံးလို ဧည့်ခန်းနဲ့အပြည့် နေရာယူလာခဲ့ရာက…. တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့
ဧည့်ခန်းထဲကနေ သူတို့က နံရံပေါ်တက်သွားကြတယ်လေ နံရံကပ်နာရီဘဝကနေ နံရံပေါ်က …ခုန်ချလိုက်တာ
အင်္ကျီ အိတ်ထောင်ထဲ တည့်တည့်ကျလို့ အိတ်ဆောင်နာရီဘဝ ရောက်ကျရတော့တာပဲ
အိတ်ထောင်ထဲမှာကြာကြာမနေတဲ့ နာရီဟာ အပြင်ကို ခုန်ထွက်ချလိုက်တာ လူ့လက်ပေါ်တည့်တည့် ကျလို့
အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ အလေးခံ ပတ်ထားရတဲ့ လက်ပတ်နာရီအဖြစ်တွေ့ရတော့တာပဲဗျို့ ….။။။။
အထဲထဲက တလှုပ်လှုပ်သွားနေတဲ့ အတိုအရှည်မညီတဲ့ အချောင်းလေးသုံးချောင်းကိုကြည့်ကြည့် ပြီး လူတွေဟာ
ဒီဟာကတော့ ဘယ်ချိန် ဒီလိုကျတော့ဘယ်နှစ်နာရီနဲ့ အဲဒီထဲက လက်တံလေး သုံးချောင်းပြသမျှ
အချိန်ဆိုပြီး လိုက်ယုံနေရတော့တာပဲလေ အဲဒီအတိုအရှည် မညီဘဲ တစ်လှုပ်လှုပ်သွားတတ်တဲ့
အချောင်းလေးသုံးချောင်း ကိုကြည့်ပြီး လူတွေဟာ..။
“အချိန်တွေနဲ့ အလုပ်ခွင်ဝင်ကြ ရတယ်
“အချိန်တွေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံကြရတယ်
“အချိန်တွေနဲ့ ယာဉ်ရထားတွေ ဝင်ထွက်သွားလာကြရတယ်
“အချိန် တွေကြောင့် ဂတိပျက်သူတွေဖြစ်ရတယ်
“အချိန် တွေကြောင့် ဝိရိယရှိသူတွေဖြစ်ကြရတယ်
“အချိန် တွေကြောင့် နောက်ကျတတ်သူတွေဖြစ်ကြရတယ်
အချိန်တွေကြောင့် ပဲ နောက်ကျခြင်း/စောခြင်း/အချိန်မှီမပြီးစီးခြင်း/မြန်မြန်ဆောင်ရွက်နှိုင်ခြင်း/အမြန်ဆုံးလူသား
/အမြန်ဆုံးကွန်ပြူတာ/အမြန်ဆုံးကား/ အမြန်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ/အမြန်ဆုံးရထား/အမြန်ဆုံးသင်္ဘော တွေဖြစ်လာရတာပါပဲ…။။။
မိတ်ဆွေသင်တို့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာပတ်ထားတဲ့ နာရီထဲက အချိန်တွေကရော တစ်ကယ်မှန်ကန်မှုရှိရဲ့လား
တိကျသေချာပါရဲ့လား နှေးနေလား ဒါမှမဟုတ်မြန်များနေသလား သက်သက်နောက်ကျအောင်လုပ်ထားသလား
မြန်အောင်တမင်တစ်ကာရှေ့တိုး ထားသလား ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ခုခုလုပ်ထားဖြစ်ထားရင် သင်ယုံကြည်တဲ့အချိန်
လူတွေဟာ အချိန်ကိုသိရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ် လိမ်ညာတတ်တဲ့သတ္တဝါပါ ကိုယ့်လက်မှာပတ်ထားတဲ့ နာရီထဲက
အချိန်ကိုတောင်ပြန်လိမ်နေတတ်ကြပါတယ် သိသိကြီးနဲ့ ငါးမိနစ်မြန်ထားတတ်တာ သိသိကြီးနဲ့ပဲ နောက်ကျထားတတ်တာပါပဲ..။။
အဲဒီလိုလူထဲမှာကျွန်တော်လဲပါဝင်ပါတယ် သိသိကြီးနဲ့ပဲ နာရီထဲကလက်တံတွေကို ငါးမိနစ်ရှေ့တိုးမြန်ထား တတ်ပြီ
အဲဒီအချိန်ဆိုတဲ့ငနဲကို လှည်စားထားပါတယ် ကိုယ့်ကိုလိမ်ညာပြီး စောစောထရပါတယ် စောစောအလုပ်ဝင်ရပါတယ်
နောက်ဆုံးကျတော့ ကိုယ့်အတတ်နဲ့ကိုယ်ဆူး ရုံးကနာရီကြောင့် နောက်ကျပြီမှအလုပ်ဆင်းရပါတော့တယ်
ဘယ်လောက်စောအောင်လာလာ နောက်ဆုံးသူများတွေနဲ့အတူတူ ပြန်ရတာပါပဲ…။။။
ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် လူတွေဟာ အချိန်တွေကို နိုင်နင်းအောင်မကိုင်တွယ်နိုင်တာ အချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတာ
အချိန်တွေနဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်တာ အချိန်တွေကိုကြောက်ရွံနေတာ ကိုယ်ပိုင်နာရီထဲက အချိန်ကိုတောင်လိမ်ညာထားတာ
အချိန်ကိုလှည့်စားထားတာ တွေဟာ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားလာပါတယ်…။။
ဆိုတဲ့စကားပုံအရ အချိန်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို စောင့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး …ရပ်တန့်နေသူအတွက်
အချိန်ဟာ အပြေးသမားကောင်းတစ်ယောက်လို သင့်ကိုဖြတ်ကျော် သွားမှာဖြစ်သလို ..
လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ အချိန်ဟာ ဖဲ့ခြွေပေးစရာမကျန်တော့လောက်အောင် ရှားပါးနေတတ်ပါတယ်
အချိန်ကို လှည့်ဖျားလိမ်ညာမှုမပါပဲ ရိုးရိုးသားသား ဆက်ဆံသင့်ပါတယ် သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်က ငါးမိနစ်မြန်နေတဲ့
မိနစ်တံလေးကို နောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းက စတင်လိုက်ပါ ..အချိန်အတိုင်းတိတိကျကျ လုပ်ကိုင် သွားလာ တွေ့ဆုံဆက်ဆံပါ
အချိန်အတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြပါ အချိန်အတိုင်းဘဝသစ်ကိုစတင်လိုက်ကြပါတော့…။။
နောက်ဆုံး သင်တို့ သေဆုံးခြင်း မှတ်တိုင်ကို ကျော်ဖြတ်မောင်းနှင် ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ထိ သင့်ဘဝရဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်မထိန်းချုပ်
နိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံအချိန် နောက်ဆုံးနာရီတွေကတော့ ဆက်လက်ရပ်တည် လည်ပတ် တိကျ စွာ အလုပ်လုပ်နေကြအုံးမယ်ဆိုတာ
လက်ကနာရီကို ငါးမိနစ်မြန်ထားပြီး အချိန်ကိုလိမ်ညာထားသူများ အတွက် ဒီအကြောင်းအရာလေးက အထောက်အကူတစ်ခုခု
he he ဒီလိုပဲ … ကျွန်မက နာရီပတ်တဲ့ အလေ့ထမရှိပေမဲ့ … အိမ်မှာရှိတဲ့ နာရီတိုင်းကို ဆယ်မိနစ်ဆီ လိုက်မြန်ထားတယ် … ။ ပြီးလျှင် ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်း ဆယ်မိနစ်ဆီ ပြန်နှုတ်သွားတယ် … ဒီတော့ ဘာမှ မထူးဘူးလေ … ။ အိမ်က နာရီတွေတင် မြန်ထားတာ မဟုတ်ပဲ ဖုန်းက နာရီပါ သုံးမိနစ်လောက် မြန်ထားတယ် … ဘာအကျင့်မှန်းကို မသိပါဘူး
“လက်ကနာရီကို ငါးမိနစ်မြန်ထားပြီး အချိန်ကိုလိမ်ညာထားသူများ အတွက် ဒီအကြောင်းအရာလေးက အထောက်အကူတစ်ခုခု
ကျွန်မတော့ လက်ပတ်နာရီတင်မက အိမ်ကတိုင်ကပ်နာရီရော၊ ဖုန်းကနာရီရောမြန်ထားတာ
အိမ်ကနာရီကတော့ တစ်အိမ်လုံးကြည့်တော့ အမှန်ပဲပြန်ထားလိုက်ရတယ်
ကိုယ်တစ်ယောက်သုံးကတော့ အမှန်အတိုင်းထားတာဆိုလို့ ကွန်ပျူတာကနာရီပဲရှိတယ်
နာရီအချိန်မြန်တာကလည်း လက်ပတ်နာရီကို ၉မိနစ်ကျော်
ကျွန်မနာရီကတော့ မနက်ခင်းရုံးတက်ချိန် အများလက်ခံထားတဲ့နာရီနဲ့ အချိန်တိုက်ပြီး မြန်ထားတာပဲ
နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်နာရီအချိန်မှန်မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ကိုဘီလူးရယ်…။
ဟက်ပီးနယူးရီးယားတညမှာ နှစ်ကူးဖို့အချိန်စောင့်ရင်း ဖဲရိုက်ကြတယ်။ အချိန်စောသေးလို့ တီဗွီကိုမြန်မာသီချင်းခွေထိုးထားပြီး ဖဲချပ်တွေပေါ် အာရုံစိုက်နေကြတုန်း တယောက်က အချိန်ကို ၁ဝမိနစ်လောက်စောလှည့်လိုက်ပြီး ဟက်ပီးနယူးရီးယား ထအော်လိုက်တော့ အားလုံးကပျာကယာနဲ့ လိုက်အော်ကြတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် အိမ်နီးနားခြင်းတွေက နယူးရီးယား count down လုပ်မဲ့အချိန်ကို စောင့်နေကြတာဆိုတော့ ဝိုင်းဟားကြတာ ဆူညံသွားတာပဲ။
ကျွန်မလည်း အချိန်ထက်နာရီမြန်ထားတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ဖို ့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးတော့ အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်
အချိန်နဲ့ဒီရေသည်လူကို မစောင့်ဆိုပေမယ့် တစ်နေ့တနေ့ ရုံးဆင်းမယ့်အချိန်ကို စောင့်စောင့်နေရတာ မောလိုက်တာ…ရနာရီ ဇာတ်လမ်းတွဲလာမည့်အချိန်ကိုစောင့်ရတာလည်း မောတာပဲ ….
လက်က နာရီကို5မိနစ်လောက်ပိုမြန်ထားပင်မယ့်
ကြည့်ရင် အြဲမဲတမ်း5မိနစ်နှုတ်ပြီး ကြည့်တက်အကျင့်
ဖြစ်နေပြီ အခုတော့ ဒီပိုစ့်လေးက သင်ခန်းစာ ယူသွားပါတယ် …………
တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ် လေးပါ၊ လက်ကနာရီ၊ဖုန်းကနာရီ၊အိပ်ခန်းထဲကနာရီ၊ဧည့်ခန်းထဲကနာရီ၊ မီးဖိုချောင် ထမင်းစားခန်းထဲကနာရီ အားလုံးကို ၅ မိနစ်စီမြန်ထားမိခဲ့တယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၅ မိနစ် စောပြီး ကြိုတင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ပါ၊ ဒီပို့လေးကိုဖတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှ မိမိကိုယ်ကို လိမ်ညာမိနေပါလားဆိုတာ သတိပြုမိတယ် အခုကစပြီး နာရီတွေ ဒေသစံတော်ချိန်နဲ့ညှိလိုက်ပါပြီ(မှန် မမှန် မသိပါ)၊ ကျေးဇူးပါ……
လက်ပတ်နာရီကို ၅မိနစ်မြန်ထားတယ်၊ အိမ်က နာရီကို ၁ဝမိနစ် မြန်ထားတယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့လည်း နှုတ်ပြီးလုပ်လိုက်တာပါပဲ. မထူးပါဘူး…
နာရီဆိုတာ အချိန်သိဖို့ ထားတာမို့ နာရီတိုင်းကို စံတော်ချိန်နဲ့ ကိုက်ပြီးထားတယ်။ သွားစရာ လာစရာရှိရင် ရောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့ သွားရင်ကြာမယ့်အချိန်ကို တွက်ပြီး ၅ မိနစ် ၁ဝ မိနစ်လောက် စောသွားလိုက်တယ်။ သူများထက် နောက်ကျတာ၊ ကိုယ့်ကို သူများစောင့်ရတာ၊ ကိုယ့်အတွက်အချိန်ကုန်တာတွေ မဖြစ်စေချင်လို့။ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းဆိုရင် အားမနာတမ်း မြန်မာ စံတော်ချိန်နော်လို့ ပြောနေကြမို့ ဘယ်သူမှ နောက်မကျရဲကြဘူး။
နာပြီး ရင် ရီချင်တယ်
နာရီ ကို ပတ်တယ်
နာရီ ဖွဲ ့တော့
ငါးမိနစ်လောက်ခွာထားတာတော်သေးတာပေါ့….။ တစ်ချို့နာရီစင်တွေဆို သာဆိုးသေး…။ ဟန်ကျပန်ကျ နာရီစင်ကြီးသာ လုပ်ထားတာ …။ တောင်ဘက်ကနာရီက တစ်မျိုး မြောက်ဘက်ကနာရီက တစ်လွဲပြ …။ ရပ်နေတဲ့နာရီက ရပ်လို့ ဒါကြီးတွေ လုပ်မဲ့အစား…။ ပရဟိတ ကျောင်းလိုနေရာမျိုး လှူလိုက်တာက တော်ဦးမယ်…။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ…ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်..ခုတော့ ကြိုးစားပြီး ဖုန်းကနာရီကို အချိန်မှန်ပြန်ရွှေ့ လိုက်ပါပြီ..
ကျွန်တော်လည်း ၅ မိနစ်မြန်ထားတဲ့လူတွေထဲမှာ ပါတယ်ဗျ။ စိတ်ချရအောင် နောက်မကျရအောင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်နည်းတာလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
မြန်မာ့အသံက ၈နာရီသတင်းလာတဲ့အချိန် မြဝတီကမလာသေးဘူး
မီးမီး သော် says:
“အချိန်တွေနဲ့ အလုပ်ခွင်ဝင်ကြ ရတယ်အချိန်ဆိုပြီး လိုက်ယုံနေရတော့တာပဲလေ အဲဒီအတိုအရှည် မညီဘဲ တစ်လှုပ်လှုပ်သွားတတ်တဲ့